Ivoti inkonzo - OUZHAN TRADE (Shanghai) CO., LTD
Inkonzo yokuphosa i-die Custom-i-OEM ye-China yokuphosa izixhobo zomenzi
I-Ouzhan yinkokeli yehlabathi ngokuthe ngqo ekubunjweni kokufa, ibikhethekile ekunikezeleni ngeenkonzo zokuphosa ngokuchanekileyo ngokufa amashumi eminyaka. Nangona ii-Ouzhan'sroots zilele kwinkqubo yethu yokulahla uninzi lwesilayidi esomeleleyo ngokulinganayo ekwenziweni kwamalungu amakhulu ngeendlela ezishushu nezibandayo zokufa.
I-die casting iyindlela ekhawulezayo yokuvelisa, eyonga iindleko yokuvelisa ivolumu ephezulu, emise okomnatha, izinto zentsimbi ezixineneyo. Ngokwesiqhelo, kufa iindawo zokuphosa zinokudityaniswa kwaye zisetyenziswe ngaphandle kokujika ngakumbi, kwaye iindawo ezinamakhonkco zinokuphoswa ngqo. Isibumbeko sinobomi obude, kwaye isikhunta sokufa sinokuvelisa naliphi na inani lezinto, ukusuka kumakhulu amawaka ukuya kwizigidi.
Ukusuka kwiindawo ezincinci ezinje ngamalungu ekhamera ngokubanzi, izixhobo zokubhala, izixhobo zekhompyuter zekhompyuter kunye nokuhombisa, kunye neendawo ezintsonkothileyo zezithuthi ezinjengeemoto, iinqwelomoya kunye neenqwelomoya, uninzi lwazo lwenziwa ngokudityaniswa kokufa.
I-Ouzhan Precision Die Cast Casting kunye neempawu:
-Ukuvelisa imveliso ngobuninzi ngeendleko
Ukudityaniswa okungaphelelanga kususa ukusebenza
- Amandla okwenza imilo entsonkothileyo
- Esitalini umgangatho ophezulu kwimveliso yobuninzi
- nokumelana Tight ekubunjweni die
- Ubomi obude bomngundo
Kutheni ukhetha i-Ouzhan Die Casting Services
1. Xa sifumana umbuzo kumthengi, siya kwenza uvavanyo lokuqala ukuze sibone ukuba singakwazi ukuvelisa. Ukuba kuyenzeka, kwaye emva kokuba iprojekthi ivunyiwe, siya kuthumela ikowuteshini.
2. Ukuhamba kwenkonzo yethu kwiiprojekthi ezintsha
• Indawo yabathengi yokubumba nokubumba iisampulu.
• Sikhupha i-PI kwi-50% yeendleko zokungunda ukuhlawula idipozithi.
• Thumela imizobo yoyilo lwabathengi ukuze yamkelwe.
• Qalisa imveliso yokubumba emva kokufumana idipozithi engama-50%.
• Thumela iisampulu kunye namanye amaxwebhu afana nokuqinisekiswa kwezinto kunye nengxelo yokuhlolwa ukuze yamkelwe.
• Ukuveliswa kwemveliso emininzi emva kokuvunywa kweesampulu.
Sineenjineli ezili-10 kwiziko lethu le-R & D, bonke ngoogqirha okanye oonjingalwazi abasuka kwiDyunivesithi yeSayensi neTekhnoloji yase China. Sinokubonelela ngeenkonzo zokuphosa izixhobo zokuyila.
Yintoni inkonzo yokuphosa into yokufa kunye nendlela esebenza ngayo yokuphosa imisebenzi
Die eyahlulayo nayo ibizwa ngokuba eyahlulayo xi. Yindlela yokuphosa apho ulwelo olutyhidiweyo luthululelwa kwigumbi lokushicilela, isikhunta sokubumba kwesinyithi sigcwalisiwe ngesantya esiphezulu, kwaye ulwelo oluyingxubevange luyomelela phantsi koxinzelelo lokwenza ukulahlwa. Ezona mpawu ziphambili zokuphosa kufa ezahlula kwezinye iindlela zokuphosa ngoxinzelelo oluphezulu kunye nesantya esiphezulu.
Isinyithi esinyibilikisiweyo sigcwalisa isithuba phantsi koxinzelelo, kwaye siqaqambe kwaye siqine phantsi koxinzelelo oluphezulu, uxinzelelo oluqhelekileyo yi-15-100MPa.
Isinyithi esityhidiweyo sigcwalisa umngxuma ngesantya esiphezulu, ngesiqhelo i-10-50 yeemitha ngomzuzwana, kwaye ezinye zingadlula kwi-80 yeemitha ngomzuzwana (isantya somgama somngxuma ngesango langaphakathi-isango langaphakathi lesango), ke intsimbi etyhidiweyo Ixesha lokuzaliswa lifutshane kakhulu, kwaye isithuba sinokugcwaliswa malunga nemizuzwana eyi-0.01-0.2 (kuxhomekeke kubungakanani bokuphosa).
Izibonelelo zokuphosa ukufa zibandakanya ukuchaneka kwamacala afanelekileyo. Ngokwesiqhelo oku kuxhomekeke ekubunjweni kwezinto. Ixabiso eliqhelekileyo li-0.1 mm kubungakanani bokuqala be-2.5 cm, kunye ne-0.002 mm kwisentimitha nganye eyongezelelweyo. Xa kuthelekiswa nezinye iinkqubo eyahlulayo, eyahlulayo umphezulu egudileyo, kwaye radius fillet imalunga 1-2.5 microns. Xa kuthelekiswa nebhokisi yesanti okanye iindlela ezingapheliyo zokuphosa ukungunda, ukujula ngodonga olumalunga ne-0.75 mm kunokuveliswa. Inokuphosa ngokuthe ngqo izakhiwo zangaphakathi, ezinje ngemikhono yocingo, izinto zokufudumeza, kunye nomgangatho ophezulu wokuqina. Ezinye izibonelelo zibandakanya ukukwazi kwayo ukunciphisa okanye ukuthintela ukuvelisa kwesekondari, isantya semveliso ekhawulezayo, ukuphosa amandla eqine ukuya kuthi ga kwi-MPA engama-415, kunye nokuphosa iintsimbi eziphakamileyo.
Izixhobo zokuphosa izixhobo -Izinto ezisetyenziselwa ukuFa
Isinyithi esisetyenziselwa ukulahla ukufa ikakhulu kubandakanya i-zinc, ubhedu, i-aluminium, i-magnesium, ilothe, i-tin kunye ne-lead-tin alloys. Nangona i-iron-cast iron inqabile, inokwenzeka. Izinyithi ezikhethekileyo zokufa zibandakanya i-ZAMAK, i-aluminium-zinc alloys kunye nemigangatho yeAmerican Aluminium Association: AA380, AA384, AA386, AA390 kunye ne-AZ91D magnesium. Iimpawu zesinyithi ezahlukeneyo zezi zilandelayo:
I-Zinc: Esona sinyithi silula ukusibulala, kuyonga ukwenza izinto ezincinci, kulula ukuzinxiba, amandla aphezulu okucinezelwa, iplastikhi ephezulu kunye nobomi obude bokuphosa.
• I-Aluminium: Ukukhanya okulula, ukuvelisa okuntsonkothileyo kunye nokujingqwa okubiyelweyo kunokuqina okuzinzileyo, ukumelana nokubola okunamandla, iipropathi ezifanelekileyo zoomatshini, ukuhambisa okuphezulu kobushushu nombane, kunye namandla aphezulu kumaqondo obushushu aphezulu.
• I-Magnesium: kulula ukuyenza ngomatshini, amandla aphezulu ukuya kubunzima, okona kukhanya phakathi kwezinyithi ezisetyenziswa ngokuqhelekileyo.
Ubhedu: Ukuqina okuphezulu, ukumelana nokuqina komhlwa, ezona zinto zisetyenziswayo xa kusetyenziswe isinyithi sokufa, ukunxiba ukuxhathisa, kunye namandla kufutshane nentsimbi.
• Ilothe kunye ne-tin: uxinizelelo oluphezulu, ukuchaneka okuphezulu, inokusetyenziswa njengezinto ezikhethekileyo zokulwa umhlwa. Ukuqwalaselwa kwempilo yoluntu, le ngxubevange ayinakusetyenziswa njengokulungiswa kokutya kunye nezixhobo zokugcina. I-alloy yelothe, i-tin kunye ne-antimony (ngamanye amaxesha inesuntswana lobhedu) inokusetyenziselwa ukwenza uhlobo lwencwadana kunye nokuqaqamba kubhalo lwe-letterpress.
Imida ephezulu yokuphosa usebenzisa i-aluminium, ubhedu, i-magnesium kunye ne-zinc yi-70 lb (32 kg), 10 lb (4.5 kg), 44 lb (20 kg) kunye ne-75 lb (34 kg) ngokwahlukeneyo.
Ezinye iinkonzo eziFumanekayo zokuphosa
Die eyahlulayo yenye yeenkqubo ezininzi zokuphosa. Njengoko efektri oomatshini processing mveliso, OuZhan nayo ezahlukeneyo ezinye izibonelelo ukulahla izityalo ezantsi. Sinokubonelela abathengi ngayo nayiphi na enye inkonzo ekubunjweni:
Indlela 1.Sand ekubunjweni
Usebenzisa isanti njengezinto zokubumba, isanti enezinto ezahlukileyo ezinokwahlulahlulwa zibe kukuphoswa kwesanti eluhlaza, umphezulu womhlaba owomileyo, njl njl, kodwa ayizizo zonke isanti ezinokusetyenziselwa ukulahla. Uncedo kukuba iindleko ziphantsi kuba isanti esetyenziswe ekubumbeni inokusetyenziswa kwakhona; Okungalunganga kukuba ukuveliswa kwesikhunta kudla ixesha, ukungunda ngokwakho akunakusetyenziswa kwakhona, kwaye imveliso egqityiweyo inokufumaneka kuphela emva kokutshatyalaliswa.
2. Metal ekubunjweni indlela eyahlulayo
Sebenzisa isinyithi esinendawo ephezulu yokunyibilika kunempahla eluhlaza ukwenza ukungunda. Phakathi kwazo zahlulahlulwe indlela womxhuzulane eyahlulayo, ephantsi uxinzelelo eyahlulayo indlela kunye noxinzelelo oluphezulu eyahlulayo indlela. Ngokuxhomekeke kwindawo yokunyibilika kwesikhunta, isinyithi esinokuphoswa sikwenziwe.
3. Indlela elahlekileyo ye-wax
Le ndlela inokuba yindlela yangaphandle yokuphosa ifilimu kunye nendlela eqinileyo yokuphosa. Le ndlela ichanekile ngokuchanekileyo kwaye inokusetyenziselwa ukwenza iindawo zokunyibilikisa izinyithi (ezinje nge-titanium). Nangona kunjalo, ngenxa yexabiso eliphezulu leseramikhi, kunye nesidingo sokufudumeza okuninzi kunye nemveliso enzima, iindleko zibiza kakhulu.
Izicelo zeCandelo lokuPhonsa iiNxalenye
Ukugqitywa komphezulu we-Ouzhan die Casting